Nezvedu - Zhejiang Xinwom Electric Co., Ltd.
Zhejiang Xinwo Electric Co., Ltd. rakaumbwa muna 2010, riri Wenzhou, yemagetsi guru China.Company pakuvaka kunosimbiswa pakutanga yepamusoro kuhwina, mutengi zvinangwa zvebhizimisi kuitira kuti asangane nevatengi zvinodiwa, makambani kuramba kuwedzera mhando zvigadzirwa, kuwedzera nhau yezvigadzirwa, kuburikidza nemakore ekuyedza kusimudzira, zvigadzirwa zvakafukidzwa fittings, magetsi fittings, tambo fittings, insulator yekuzviparadzanisa switch, kumanikidza kudonha, yakakwira uye yakaderera magetsi mheni inosunga, vharuvhu redunhu mudariki, nezvimwewo Iyo kambani ine anopfuura makumi mashanu ekutengesa zvitoro munyika yose uye kunze kwenyika mhiri kwemakungwa, seCuba, Vietnam, India, South Africa nedzimwe nyika.
Xinwom kambani yanga yakanamatira kune yesainzi uye tekinoroji yekuvandudza, kuenderera mberi nekutsvaga uye kugadzirisa kweumwe neumwe wezvinhu zvigadzirwa, kugadzirisa mashandiro ezvigadzirwa, kuwedzera kukosha kwezvigadzirwa. Iyo kambani yakapihwa gumi nematanhatu emunyika anoshanda matsva patent uye imwe yekugadzira patent. Muna 2014, kambani yavose sezvavakatarirwa sezvo yueqing Science uye michina utsanzi zvebhizimisi uye Zhejiang Science uye Technology utsanzi Enterprise azvaitwa.Muna 2019, yakanga yavose sezvavakatarirwa sezvo National yepamusorosoro zvebhizimisi.
Xinwom akapfuudza iyo ISO9001 yemhando system chitupa muna 2011, iyo S14000 yezvakatipoteredza system chitupa uye iyo ISO18000 Hutano system chitupa muna 2017, uye mhando zhinji dzezvigadzirwa zvakapasa nyika yekuyedza masangano (senge Wuhan High Pressure Research Institute, Xi 'High Pressure Research Institute , uye Nanjing Quality Inspection Center) .Uye yakasainwa chibvumirano chekupa nekusingaperi neABB, Palp nemamwe makambani epasi rese, ndiye chete mutengesi anokwanisa wemagetsi muChina.
Xinwom kambani kuburikidza nekusaedza kwevanhu veXinwom, yave seti yekutsvagisa kwesainzi, kugadzira, kutengesa, sevhisi mune rimwe bhizinesi rakakura mune ramangwana, Xinwom icharamba ichitevedzera chinangwa chekambani, kushandira vatengi nechido chikuru, tarisa zvakanyanya pane hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, nyanya kutarisisa kunaka kwechigadzirwa.